Runako - iye ari muziso remuoni here? Nguva yekuona
Izvo shumbakadzi inorara yakavhara mucheka uye inocherechedza mbongoro, iyo inodzura zvisingaoneki pane uswa hwakaoma. Iyo mhuka inosvetuka mberi nejerk uye kushamba kunotanga. Iwe unogona kuona mitsipa yake yakasimba ichibvisa pasi nesimba rakazara. Tinotaura pamusoro pekunaka.
Inhumbakadzi imhuka yakanaka, yakanaka. Asi runako ihwowo maruva ane mavara, saka akaoma uye akagara kwenguva pfupi mukuvapo kwayo.
Vakaroorana murudo pakuvira kwezuva-akanaka, kurudyi?
Kunyange zvakadaro, tinonakidzwa nekunhuhwirira kwayo nemaruva ayo akanaka. Zvinhu zvose izvi hazvina zvishoma, asi tinosonganidza shoko rokuti "runako" pamwe chete.
Nei zvakadaro? Sei tichidana zvose zvinokuvadza uye zvinokuvadza zvinopisa uye zvisingakoshi uye maruva maruva akanaka?
Runako haruna kubhakwa
Runako ipfungwa isina kujeka uye nhema mumeso eanoona. Nokudaro, tinonzwa vanhu vakasiyana chaizvo sevakanaka. Runako ndiko kunzwa kunokonzerwa nemanzwiro ekuona uye maziso.
Nheyo, runako muziso remuoni, asiwo inotarisa imwe neimwe nzira. Nenzira iyi, munhu wese ane unhu hwakanaka maari. Mumwewo anotaura nezvekunaka kwemukati.
Izvi zvinogona kuva kusemwerera, kutarisa kunonyengera kana chimwe chiito. Kana zvimwe zvose izvi panguva imwe chete. Munhu wose akanaka. Uye munhu wose anoda kunaka kwake kuonekwa.
Kwete runako pasina kuonga
Kuti uwane hukama hwakanaka uye hwepedyo, mukadzi wese uye murume wese anofanira kutanga aziva uye anozvifarira ivo pachavo. Kana munhu achizviratidza kuva akanaka, zvinokonzera manzwiro akawanda kune vamwe vanhu.
Munhu wacho anotarisa akaisvonaka, ane nyasha uye akanaka. Ndicho chisarudzo chinokosha chinoshandura munhu akajeka kuva munhu akanaka. Tinowira mukudanana nerudo rwevanhu.
Tinofambidzana zvakanaka nemumwe munhu ane tsitsi dzinomunzwira tsitsi. Tinosemwerera kune mumwe munhu asingazivi mumugwagwa nokuti anotiita kuti tinzwe tichidziya.
Runako huri mumunhu wose
Munhu wose akanaka. Zvisikwa zvose zvakanaka. Nenzira yake pachake, mifananidzo yese uye mamiriro ese ezvinhu ane unhu hwemunhu oga uye hwakanaka mauri.
Kuziva, kuratidza uye kunyange kurarama izvi unyanzvi. Unyanzvi hunogona kungodzidza kuburikidza nehukama uye chido.
Kuva akanaka zvinoreva iwe pachako rudo. Uye uzvikoshese iwe nevamwe vako vanhu vanopa charisma uye charisma yakanaka.
Kafi - Nhau yezvinonyanya kunwa zvinwiwa
Mhedziso kune "runako - ndeye maziso eaiona here?"
4. November 2018 pa 19: 40 clock
Kwandiri runako nguva dzose mubvunzo wemukati mahara. Ani naani ane rugare naye pachake anotarisa akanyanya kusununguka uye anofara panze. Izvi zvinokanganisa vamwe vanhu kupfuura kuonekwa kwakachena.